शिल्पा शेट्ठीलाई पनि पक्राउ गर्दै मुम्बई पुलिस, के के छन् आरोप? – Kavrepati
Home / मनोरंजन / शिल्पा शेट्ठीलाई पनि पक्राउ गर्दै मुम्बई पुलिस, के के छन् आरोप?
शिल्पा शेट्ठीलाई पनि पक्राउ गर्दै मुम्बई पुलिस, के के छन् आरोप?
admin2weeks ago	मनोरंजन Leaveacomment 69 Views
सुनको व्यापार प्रकरणमा प्रवर्तन निदेशालयको अनुसन्धानको क्रममा रहेका राज कुन्द्रालाई पक्राउ गरिसकेपछि मुम्बई पुलिसले उनकी श्रीमती शिल्पा शेट्टीलाई सोधपुछको तयारी गरिसकेको छ । मुम्बई प्रहरीले थाहा पाएको छ कि शिल्पा शेट्टीले १४ बर्षदेखि फिल्मबाट टाढा भएर पति राज कुन्द्राको ब्यापारमा साथ दिइरहेकी छिन् ।
पतिसँगको उनको व्यापारिक साझेदारीका कारण पनि उनीहरुको लगातार आर्थिक बृद्धि भएको हो । शिल्पा शेट्टीले आफ्नो आयलाई युट्यूब, इन्स्टाग्राम र अन्य सोशल मिडियामा आफ्नो उपस्थितिका कारण भएको बताएकी छिन् । उनीसँग एक दर्जन ब्राण्ड विज्ञापनहरू पनि छन् । तर प्रहरीका अनुसार राज कुन्द्राका हरेक ब्यापारमा शिल्पाको सहभागिता र साझेदारी हुने गरेको छ । यी ब्यवसायहरु शिल्पाको निर्णय बिना अघि बढेका होइनन् ।
शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा अहिले पक्राउ परेका छन् । कुन्द्रा पक्राउ परेको घटनाले बलिउड तरंगित भएको छ । चर्चित व्यापारी कुन्द्रालाई मुम्बई क्राइम ब्रान्चले सोमबार अबेर राति पक्राउ गरेको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । उनीमाथि अ श्ली ल चलचित्र बनाउने र केहीलाई एप्समा देखाएको आरोप छ ।
राजलाई मंगलबार बिहान स्थानीय समयअनुसार ११ बजे अदालतमा पेश गरेको पनि जनाइएको छ । यसअघि कुन्द्रालाई बिहान ४ः१५ बजे जेजे अस्पतालबाट मुम्बई कमिशनर प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको थियो । मुम्बई प्रहरीले राज कुन्द्रासहित ११ जनालाई पक्राउ गरेको हो । फरवरी २१ मा कुन्द्र विरुद्ध उजुरी परेको थियो । उनलाई निकै लामो समय सम्म सोधपुछ गरेर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
Previous ह्वात्तै बढ्यो कर्मचारीको तलब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि
Next यो दुखद समयमा आखिर चम्सुरिको श्रिमान खै ? यस्तो भएको रहेछ (हेर्नुस् भिडियो )